Xasan Sheekh Maxamuud oo tagaya caasimadaha Maamul Goboledyada dalka ka jira | Baydhabo Online
Xasan Sheekh Maxamuud oo tagaya caasimadaha Maamul Goboledyada dalka ka jira
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isku dhinac wada ololihiisa Doorashada sanadkan iyo kormeerka arimaha Doorashooyinka ayaa sheegay inuu tagi doono caasimadaha Maamul Goboledyada dalka ka jira.
Xasan Sheekh ayaa shalay ka soo laabtay Magaalada Baydhabo ee xarunta Maamulka Koonfur Galbeed oo labo cisho uu ku sugnaa, halkaasi waxaa uu ka waday arimo la xiriira Ololihiisa Doorashada iyo sida ugu haboon ee uu ku heli karo codadka xubnaha Aqalka hoose ee ka imaanaya Koonfur Galbeed.
Wareysi uu siiyay Tv-ga Universal Madaxweyne Xasan ayaa wuxuu sheegay si looga baaqsado dib u dhac salka ku haayo arimo farsamo awgeed inuu tagaayo xarumaha Maamul Goboledyada dalka ka jira, si loogu dhiirageliyo qabsoomida arimaha Doorashooyinka.
“Magaalooyin kale oo Dowlad Goboledyada ka mid ah waxaan u tagi doonaa si aanu dib u dhac u imaanin oo laga hortago sabab kasta oo keeni karta dib u dhac ku yimaada howlaha Doorashooyinka Somaliya, maalmaha soo socda ayaan tagi doonaa.” Ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa sheegay dib u dhacyada ku yimid Doorashada inay salka ku hayaan arimo farsamo oo Dowladiisa ay diiday muddo kororsiimo sanad ka badan oo la qorsheeyay in loo sameeyo.
“Muddo sanad ka badan ayaa howlaha Doorashada laga shaqeynaayay, 2013 ayaa shir la qabtay oo ku saabsanaa siyaasada Somaliya, Waxaana shirkaasi ka soo baxay barnaamij loo bixiyay Hiigsiga 2016, intaa wixii ka dambeeyay waan ku shaqeyneynay in doorashada 2016 ay dhacdo, dib u dhaca hadda yimid mid farsamo waaye, waxaan diidnay kororsiimo labo sano ilaa hal sano”.
Weli waxaa shaki badan uu ka jiraa qabsoomida Doorashada dadban ee dalka oo la filaayo in bilaha soo socda ay dalka ka qabsoonto, xilli labo mar dib u dhac arimo farsamo ah ay ku timid Doorashada.